Raaxaysan Trip xadgudubka-Free A: hostel Accommodation | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Raaxaysan Trip xadgudubka-Free A: hostel Accommodation
Hostels ayaa raabka u xun isagoo wasaq, aragdarnaan, iyo da'day. Laakiin ma ogtahay in hoteelada hadda la casriyeeyay? Waayo, kuwa aan garanaynin waxa hostels yihiin, huteelka uun uma khaldin oo waanu la orodnay. Hostels yihiin fududeynta cheap kaa caawin doona inaad fidin miisaaniyad safarka aad.
Haddii aad tahay a socotada Solo ama la dhoofayso qoyskaaga ama wax kaloo muhiim ah, hostels leeyihiin nooc hoy ah adiga uun. Hostels sida caadiga ah ayaa qolalka la wadaago. qolka A wadaago yeelan karto 8 si ay u 10 dadkii oo dhammu wada islmarkaana. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin qolal yeelan kara 3 ama 4 dadka qol la wadaago. Haddii aad doorbidayso meel adiga kuu gaar ah, meelo badan bixiyaan qolal gaar ah ama qolalka qoyska, haddii aad tahay Tegay qoyska.
Hostels yaabaa inaadan sharraxaad in hotels bixiyaan. Sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa in mashiinka kafeega ninna waa ka waynay qolkaaga, maya saabuun lacag la'aan ah, ama qaboojiyaha adiga kuu gaar ah. Waxaad ma doonaa xataa la qaadan shukumaan free. Laakiin qaar ka mid ah hostels dhab iibiso saabuun iyo waxyaabaha kale ee daruuriga qiimo raqiis ah. waana hubaa, aad u badan tahay oo aan haysan doonaa beer gaar ah ama armaajo qolalka la wadaago, laakiin waxa ay leedahay lookarrada meesha aad ku hayn kartaa wax aad. Laga yaabaa in aad soo qaado padlock u gaar ah, in kastoo. Haddii boorsadaada waa mid aad u weyn oo ka dib markii magalka, waxaad weli u rabaan in ay sameeyaan qaar ka mid ah daqiiqadii ugu danbeysay- meelaha la, waxaad ka bixi kartaa bac aad dukaanka boorsooyinka.
Ka fogow helitaanka meel nadiif ah oo lagu seexdo iyo a sanduuq aamin ah si aad u keydiso alaabadaada, qaar ka mid ah meelahan bixiyaan waxyaabaha kale. meelaha qaarkood waxay leeyihiin doonaan waxyaabaha sida helitaanka pool, quraac bilaash ah, kafeega bilaash ah, hawlaha bulshada. Qaar ka mid ah xitaa waxay leeyihiin Baraakada iyo tiixo massage iyo maqaayado indoor.
okay, Hubaal, aad u badan tahay ma heli doono gaarka ah isla aad u hudheel. Waxaa jira meelaha la wadaago sida musqulaha, jikooyinka, meelaha Saaladda, iyo xarumaha shaqada. Si kastaba ha ahaatee, tani waa hab wanaagsan oo la kulmo dadka. Haddii aad joognaa in meelaha la wadaago waxaad kula kulmi kartaa dadka safarka ah ka soo adduunka oo dhan. Oo xataa bilaabi saaxiibtinimada macno leh dadka aad la kulanto in aad safaradiisa oo ay leeyihiin saaxiibada cusub safarka mustaqbalka, sidoo kale! Dadka ka shaqeeya hostels waa dad inta badan xiiso leh iyo bulsho ah, sidaas darteed way fiican inay qasaan iyo falgalaan iyaga la, sidoo.
Meesha aad ka heli
Qaar ka mid ah hoteelada ayaa ku jira xarumaha magaalada ama in meelo aad si kale xitaa ma muujin doonaa. -beege Miami, hostel ah ee Florida, waa blocks laba kaliya ka fog xeebta iyo bixisaa qaxwada qabow si xor ah u guests ay. Iyo hostel HBS a Swiss bilaabay by doon ahayn oo lagu magacaabo Hostelling International ayaa maqaayad ah indoor in jeedaa Alps Swiss ah.
Imisa Waxay caadiga Qiimaha
Haddii aad tahay qofka socotada miisaaniyad, waxaa aad u badan tahay in aad noqon doonto mid aad u badan xiiso u jooga hostel ah. Qiimayaashu waxay ka bilaaban karaan ugu hooseeya dhowr senti illaa $100 qolalka la wadaago, iyada oo ku xidhan qayb ka mid ah dunida oo aad ku sugan tahay, laakiin waxa aad dhif u ah qiimaha si ay u tagaan ka badan in. Xitaa hostel in jeedaa ah Alps tagaa hareeraha $64 halkii habeen.
Macluumaadka la soo dhaafay waxaan rabnaa in aan ku siin waa, Habka ugu fiican ee si aad u hesho si aad u hostel waa by safarka tareenka la Save A tareenka iyo sababta in ay tahay in mar walba tareenada yimaadaan qalbiga magaalada iyo in uu yahay meesha waafajin hostel yihiin, raaxaysan safarka iyo tareen safarka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in si / PL ama / de iyo luuqado badan.
Karina Santos - waa hooyo wiil 2 jir ah, iyo xaas. Maalinteeda waxaa ka buuxa xafaayad iyo emayl. Sababtan awgeed, waxay daah furtay heer cusub oo shaqo badan ah. Maalmaheeda shaqo inta badan waxay ku wareegaan shaqada, iyo qoyska. Waxay jeceshahay inay usbuuc-dhammaadka usbuuca la qaadato ilmaheeda oo ay habeenno la qaadato ninkeeda. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe, Safarka Iceland
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Best Points qwaxy Start In Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, safarka Europe